राजाकै जस्तो जीवन विताउँछन् यी राशिका व्यक्ति, हुन्छन् निकै धनी र विलासी – Sandesh Press
August 14, 2021 328
ज्योतिष शास्त्रमा १२ राशि उल्लेख गरिएको छ। राशिका माध्यमबाट मानिसको स्वभाव र भविष्यका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। व्यक्तिको स्वभावमाथि उनको राशिको स्वामी ग्रहको प्रभाव हुने गर्छ। आज हामी तपाईलाई सबै राशिका स्वामी ग्रह ग्रहले स्वभावमा पार्ने प्रभावका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
आउनुहोस् जानौँ कुन राशिको भाग्य कस्तो हुन्छ ?
मेष राशि: मेष राशिको स्वामी ग्रह मंगल हो । यस राशिका मानिस निकै स्वतन्त्र विचारका हुने गर्छन्। साथै यी राशिका व्यक्तिमा पराक्रम र साहस पनि निकै हुने गर्छ। यिनीहरुले आफ्नो कुरा दोस्रो व्यक्तिका सामु कसरी राख्ने भन्ने बारेमा निकै राम्रोसँग जानेका हुन्छन्। तर यी राशिका व्यक्तिलाई रिस भने चाडै उठ्ने गर्छ। कुनै कुनै कुरामा त यिनीहरु निकै आक्रामण पनि देखिने गर्छन्।
वृष राशि: वृष राशिको स्वामी ग्रह शुक्र हो । यस राशिका व्यक्तिको स्वभाव निकै शान्त हुने गर्छ। यिनीहरुलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीका बारेमा निकै थाहा हुन्छन् । साथै यिनीहरुका कुरा परिवारका सबै सदस्यले मान्ने गर्छन्। साथै यिनीहरु धन, सम्पत्ति र प्रसिद्धि पाउनका लागि निकै लालायित हुने गर्छन्।
मिथुन: मिथुन राशिको स्वामी ग्रह बुध हो । यी राशिका व्यक्ति वाक कलामा निकै निपुण हुने गर्छन्। साथै यिनीहरुमा कयौँ भाषाको ज्ञान पनि हुने गर्छ। कहिले काही यिनीहरुका दुई अनुहार देख्न पाइन्छ। जसका कारण यिनीहरुलाई बुझ्न निकै कठिन हुने गर्छ।
कर्कट राशि: कर्कट राशिको स्वामी ग्रह चन्द्र हो । यस राशिका व्यक्ति निकै सफा र स्वच्छ मनका हुने गर्छन्। यिनीहरु आफूले आफैले निकै प्रेम गर्ने गर्छन्। यिनीहरु कुटनीति बनाउनमा निकै माहिर हुने गर्छन्। कयौँ पटक यी राशिका व्यक्त्किो अभिमानी स्वभाव देख्न पाइन्छ।
सिंह राशि: सिंह राशिको स्वामी ग्रह सूर्य हो । यी राशिका व्यक्ति सूर्यसँग प्रभावित हुने गर्छन्। यी राशिका व्यक्तिमा नेतृत्व गर्ने क्षमता बाल्यकालदेखि नै हुने गर्छ। यी राशिका व्यक्ति साहस र उर्जाका निकै धनी हुने गर्छन्। यिनीहरुको जीवन राजाको जस्तै विलासीमा वित्ने गर्छ। घमण्ड र रिस यस राशिका व्यक्तिको नकारात्म पक्ष मानिन्छ।
कन्या राशि: कन्या राशिको स्वामी ग्रह बुध हो। यिनीहरुको सोच रुढिवादी र आलोचक हुने गर्छ । कहिलेकाही यिनीहरुले सानो कुरालाई पहाड पनि बनाउने गर्छन्। साथै यी राशिका व्यक्तिमा सोचेको काम पूरा गर्ने स्वभाव निकै कमालको हुने गर्छ।
तुला राशि: तुला राशिको स्वामी ग्रह शुक्र हो । यस राशिका व्यक्ति आकर्षकतर्फ उन्मुख हुने गर्छन्। यस राशिका व्यक्तिलाई महंगो र ब्राण्डेट चीज निकै मन पर्छ। यस राशिका व्यक्तिले वाद विवाद र बहजमा प्राय असफल हुने गर्छन्।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह मंगल हो । यी राशिका व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्वका मालिक हुने गर्छन्। यिनीहरु आफ्नो भावना लुकाएर राख्ने गर्छन्। त्यसैले यिनीहरुलाई सजिलै बुझ्न निकै मुस्किल पर्ने गर्छ। यिनीहरुमा उत्साह र पराक्रमको भावना पनि देख्न पाइन्छ।
धनु राशि: धनु राशिको स्वामी ग्रह वृहस्पति हो । देवगुरु वृहस्पति जस्तै यी राशिका व्यक्ति पनि निकै ज्ञानी हुने गर्छन्। यी राशिका व्यक्तिमा इमान्दारी, सच्चाई, विश्वसनियता र समझदारी हुने गर्छ। कहिले काही यिनीहरुको रिसाह र आक्रामक स्वभाव पनि देख्न पाइनछ।
मकर राशि: मकर राशिको स्वामी ग्रह शनि हो । यी राशिका व्यक्तिले निकै गहिरो सोच राख्ने गर्छन्। यिनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्णरुपमा सजक हुने गर्छन्। यिनीहरुले जुन कामलाई हातमा लिन्छन्, त्यसलाई पूरा गरेरै छोड्ने गर्छन्।
कुम्भ राशि: कुम्भ राशिको स्वामी ग्रह शनि हो। यस राशिका व्यक्ति निकै दयालु हुने गर्छन्। यिनीहरुको बुद्धिमानी, चतुर र तार्किक क्षमता निकै कमालको हुने गर्छ। आफ्नो वाणीले जो कोही व्यक्तिलाई पनि साथी बनाउन माहिर हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति।
मीन राशि: मीन राशिको स्वामी ग्रह बृहस्पति हो । यी राशिका व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुने गर्छन्। यिनीहरु आफ्नो कुरा राख्न र तर्क वितर्क गर्नमा निकै माहिर हुने गर्छन्। यिनीहरु आफ्ना नजिकका साथीको निकै ख्याल राख्ने गर्छन्।
Prevपाइला पाइलामा झुट बोल्छन् यी राशिका व्यक्ति, सधैँ रहनुहोस् सावधान !
Nextशत्रुले पनि झुक्याउन सक्दैनन् यी ५ राशिका व्यक्तिलाई, हुन्छन् निकै चलाख र वुद्धिमान
कार्यकर्ताले गल्ती गरेर देउवालाई यसपटक जिताए कांग्रेसका पुस्तौँले पछुताउनु पर्छ : गगन थापा
फ्यानसँग फोटो खिच्दै गर्दा तीनपटक ‘ब्याड टच’ गरेपछि थप्पड हानेँ, पछि आफै रोएँ
समिक्षा भन्छिन: मैले मिडियामा सत्य कुरा लुकाए पल दाईको गल्ति छैन पैसा देखाएर यो काम गर्न लगाईयो